चुनावमा ‘भोट क्यास’ गर्न प्रतिगमनको बाटो रोज्दै एमाले ? – Everest Dainik
चुनावमा ‘भोट क्यास’ गर्न प्रतिगमनको बाटो रोज्दै एमाले ?
काठमाडौं, पुस १०। ब्यवस्थापिका संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अहिले पुनः पुरानै बाटोमा फर्किने संकेत गरेको छ । संविधानसभाबाट घोषणा गरिएको संविधानमा उल्लेख भएका संघीयता, धर्म निरपेक्षताबाट पछाडि फर्किनुपर्ने संकेत एमाले नेतृत्वले नै गर्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै एक टेलिभिजन अन्तरर्वार्ता दिँदै ओलीले संघीयता कतैबाट आयातित भन्दै जनताको माग नभएको बताएका थिए । ओलीले एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै संघीयताविरुद्धमा अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् ।
बुधबार भक्तपुर बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा पूर्व सांसद मञ्चका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा संघीयताबाट पछाडि फर्किनुपर्ने निश्कर्ष नै सुनाए । उनले पाँच विकाश क्षेत्रकै अवधारणा जायज भएको तर्क गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओली मात्र होइन, एमाले अन्य बरिष्ठ नेताहरु पनि परिवर्तनका उपलब्धीबाट पछि हट्नुपर्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संघीयता मात्र होइन, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु नै भूल भएको अभिब्यक्ति दिएका छन् ।
आगामी २०७४ माघ ७ भित्र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता हुँदा हुँदै एमाले अहिले सविधान संशोधन नै हुनुहुँदैन भनेर मधेसी तथा जनजाति समुदायलाई चिढाउने काम मात्र गरेको छैन, निर्वाचनको रटान लगाउने तर तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने बाटो रोजिरहेको छ ।
एमाले यस्तो पार्टी हो, जसले विगतमा परिवर्तनको एजेण्डामा बाधक बनेर परिवर्तनकारी शक्तिको समेत धज्जी उडाउने काम गरेको थियो । एमाले एउटा कम्युनिष्ट पार्टी भएर पनि दरबार हत्याकाण्डपछि नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई दाम चढाएर एमाले तत्कालिन महासचिव माधव नेपाल आलोचित भए ।
कांग्रेस लगायतका पार्टीहरुसमेत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई प्रतिगमन भनेर सडकमा आएकाबेला प्रतिगमन आधा सच्चिएको भनेर एमाले फेरि पनि आलोचित बनेको थियो । ज्ञानेन्द्रले आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीको विज्ञापनमा एमाले नेता नेपालले आवेदन दिन पुगेका थिए ।
२०५८ सालमा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड हुँदै शाही ‘कू’ विरुद्ध मुलुकमा गणतन्त्रको नारा घन्किँदा बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भनेर गणतन्त्रविरोधी अभिब्यक्ति दिने नेता केपी शर्मा ओली अहिले एमालेका अध्यक्ष हुन् ।
संविधान अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसवादी दलको माग समेट्न भन्दै यिनै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला संविधान जारी भएको चार महिनामै संशोधन गराए । तर मधेसीहरु अहिलेसम्म पनि आन्दोलित नै छन् । त्यसैले मधेसीलाई समेत साथमा लिएर सहमतिमा अघि बढ्ने प्रयासलाई भाँजो हाल्दै एमाले यतिबेला राष्ट्रियताको दुहाइ दिएर प्रतिगमनको बाटो रोजिरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको एमालेले पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन गर्नेदेखि धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत संग्रहमा जानुपर्नेतिर बाटो सोझ्याउँदै छ ।
पूर्व पञ्च तथा राजावादी शक्तिहरु एक भइरहेकाबेला तीनै शक्तिलाई प्रश्रय दिँदै एमालेले चालेको पछिल्लो कदमकै कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमेत यहि मौका भन्दै सडकमा आउने उद्घोष गरेका छन् । यहिमौकामा सत्तासिन दलहरुलाई बाह्य प्रभावको अस्थायी सरकारको उपमा दिएर नेपालाको राजनीतिमा खुल्ला चुनौति दिएका छन् ।
खबरडबलीमा प्रकाशित टिप्पणी साभार